Sarimihetsiky ny mpitondra… tsy mihetsika amin’ny vahoaka | NewsMada
Sarimihetsiky ny mpitondra… tsy mihetsika amin’ny vahoaka
Anisan’ny mampiavaka izao fitondrana izao ny fanaovana sarimihetsika? Tsy inona fa fihetsiketsehana ivelany hoe manara-dalàna, manao an’izatsy na izaroa… Tsy araka ny vava sy ny seho ivelany tsinona ny tena atao sy ny zava-misy.
Toy izany ny amin’ny fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana, ady amin’ny kolikoly, fanajana ny zon’olombelona, fampanjakana ny demokrasia… ? Anisan’ny fepetra takin’ny mpamatsy vola sy ny fiombonambe iraisam-pirenena ireo.
Matoa tanisaina na ampahatsiahiviny lava ankolaka na mivantana, isaky ny mihetsika na isak’izay mahatsiaro: mbola tsy misy izany, na tsy ampy. Tsy azo anaovana sarimihetsika ny tompom-bola? Hafa ny vahoaka heverina ho zaza sy bado.
Amin’izao, tsy zaza na bado ny vahoaka, ka tsy mahalala na tsy hahavaka ny fitsinjovana ny fiainany sy fihetsiketsehana ivelany hahazoany ny vatony amin’ny fifidianana. Tsy inona fa fanaovana fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana.
Mbola mahavita be no ho ny asa efa vita amin’izao, hono, ny mpitondra, raha omena fotoana; mitsinjo sy mieritreritra isan’andro izay hahasoa ny vahoaka, hono; tsy mijery afa-tsy ny tombontsoam-pirenena sy izay hahasoa ny vahoaka, hono…
Izao vao mikoropaka mitanisa sy mihirahira izany? Hanakonana izay tsy natao sy tsy vita hatramin’izay, na hampandriana adrisa fanindroany indray… Mahay manavaka ny tena izy sy ny sarimihetsika ny vahoaka, matoa tsy mihetsika?
Eo ihany izay fisehosehoana sy fisekosekoana, fa tsy misitraka inona amin’izay lazaina aminy sy hoe atao isan’andro tsinona ny vahoaka ifotony. Izay no tsy mampihetsika azy amin’izay sarimihetsika… tsy mampiova ny fiainany?
Tsy misy inona miova na mihetsika ny tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, fandrobana tany, ny harem-pirenena voaroba… Izany ny tena sary velona iainan’ny vahoaka isan’andro, tsy vita na takon’izay hetsika… sary ivelany.